मानिसको ब’लि चढाएर काेराेनाकाे उपचार ? – Sudarshan Khabar
मानिसको ब’लि चढाएर काेराेनाकाे उपचार ?
भारत ओडिसाको कटक जिल्लामा पर्ने नरसिंहपुर स्थित एक मन्दिरमा मानिसको ब’लि चढाईएको छ । शनिबार त्याहाँका पुजारीले मन्दिरको देवीलाई मानिसको ब’लि चढाएका हुन् । उनले कोरोना भायरसको महामारीबाट मुक्त हुनकोलागी मानिसको ब’लि चढाएको भन्ने समाचार यतिबला भारतीय विभिन्न मिडियाहरुमा प्रकाशित भएका छन् ।
नरसिंहपुर बंधहुडा गाउँमा ब्राहमणी देवीको मन्दिर रहेको छ । बुधबार राती उक्त मन्दिर परिसरमा ब’लि चढाईएका व्यक्तिको ला’स फेला परेको त्याहाँका स्थानिय पुलिसले बताएका छन् । स्थानिय पुलिसका अनुसार ब’लि हुने व्यक्तिको नाम सरोज कुमार प्रधान रहेको छ । पुजारीको भनाई अनुसार त्यस दिन मन्दिरमा ब’लि’को विषयलाई लिएर मृ’त’क प्रधान र पुजारी संसारी ओझाबीच बहस भएको थियो ।
त्यसरी बहस हुने क्रममा हालात विषय भन्दा पर गएपछि पुजारी ओझाले मृ’त’क प्रधानको टाउको का’टि’दि’ए’का रहेछन् । पुलिसलाई दिएको बयानमा आरोपीले भनेका छन्, ‘मलाई सपनामा देवीले मानिसको ब’लि चढा अनिमात्रै विश्वबाटै कोरोनाको महामारी टलिजाने भनेर दर्शन दिएको हुनाले मैले देवीलाई बलि चढाएको हुँ ।’
त्याहाँका डिआईजि आशिष कुमार सिंहका अनुसार घटनापछि पुजारी ओझाले आफुले गरेको अ’प’रा’ध स्वीकारेका छन् । भारतीय पुलिसका अनुसार ह’त्या गर्नकोलागी प्रयोग गरिएको ह’ति’या’र कब्जा गरिएको छ । भने मृ’त’क’को शरिरलाई पोष्टमार्टमकोलागी अस्पताल लगिएको छ । यस घटनाको विषयलाई लिएर त्याहाँका स्थानियहरुले दो’षि’ला’ई कडा भन्दा कडा कार्वाही गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।